Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.3.3 Qiimaha
Sahamis ma aha lacag la'aan ah, oo tanuna waa caqabadda dhab ah.
Ilaa hadda, waxaan si kooban u eegay qaab-dhismeedka qaldan ee qalabka sahanka, taas oo lafteedu ay tahay mawduuca daaweynta muddada-dheer (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) . Inkasta oo qaab-dhismeedkani uu yahay mid dhamaystiran, badanaa wuxuu keenaa cilmi-baarayaasha in ay iska dhaafaan arrin muhiim ah: kharashka. Inkasta oo qiimaha-lagu cabbiri karo wakhti ama lacag-marar dhif ah ayaa si faahfaahsan uga hadla cilmi baadhayaasha cilmiga ah, waa caqabad dhab ah oo aan la iska indho-tirin. Dhab ahaan, kharashku waa aasaas u ah geeddi-socodka baaritaanka sahaminta (Groves 2004) : waa sababta ay cilmi-baarayaashu wareysteen dad muunad ah halkii ay dadku dhammaan lahaayeen. Xasilooni hal dhinac ah si loo yareeyo khaladaadka markaad gabi ahaanba iska dhigi karto kharashka ma aha had iyo jeer hadana danta ugu fiican.
Xaddidaadaha caqabada ah ee khaladaadka yaraynta waxaa lagu muujiyey mashruuca caanka ah ee Scott Keeter iyo asxaabtiisaba (2000) saamaynta hawlaha qaaliga ah ee qaaliga ah ee yaraynta jawaab-la'aanta jawaabaha telefoonka. Keeter iyo asxaabtooyu waxay ka soo baxeen laba daraasadood oo kala duwan, midna wuxuu adeegsanayaa nidaamka qorista "standard" oo midna wuxuu adeegsanayaa nidaam shaqeed oo adag. Farqiga u dhexeeya labadii daraasadood waxay ahaayeen xadiga dadaalka ee la xiriirey jawaabeyaasha iyo ku dhiirigelinta inay ka qaybqaataan. Tusaale ahaan, daraasaddan "shaqeynaya", cilmi baarayaasha ayaa lagu magacaabaa qoysaska la tijaabiyay marar badan iyo wakhti wakhti dheer waxayna sameeyaan baaqyo dheeraad ah haddii kaqaybgalayaashu markii hore diidaan inay ka qaybqaataan. Dadaalladaan dheeraadka ahi waxay sameeyeen xaqiiqda soo-saarka qiime-la'aanta jawaab-celinta, laakiin waxay ku darsadeen kharashka si weyn. Daraasada adigoo isticmaalaya nidaamka "adag" wuxuu ahaa labo jeer qaali iyo siddeed jeer oo tartiib ah. Iyo, dhammaadka, labada cilmi-baaris ayaa soo saaray qiyaaso isku mid ah. Mashruucaan, iyo sidoo kale waxyaabahan soo socda ee la mid ah natiijooyinka la midka ah (Keeter et al. 2006) , waa inuu kugu hogaamiyaa: Ma waxaan ku wanaagsanahay laba sahan oo macquul ah ama mid ka mid ah sahaminta aan rasmiga ahayn? Ka warran 10 sahan oo macquul ah ama hal sahan oo aan rasmi ahayn? Ka warran 100 sahan oo macquul ah ama hal baadhis oo aan rasmi ahayn? Waqtiga qaarkood, faa'iidooyinka kharashka waa in ay ahaadaan kuwo aad u sarreeya, welwel aan fiicneyn oo ku saabsan tayada.
Sida aan ku soo bandhigi doono cutubkan intiisa kale, fursado badan oo ay abuurtay da'da dijitalka maaha wax qiyaaso ah oo qeexaya khalad hooseeya. Taas, fursadahaasi waxay ku saabsan yihiin qiyaasida tiro kala duwan iyo qiyaasta samaynta qawaaniinta oo ka raqiisan, xitaa khaladaad badan. Cilmi-baarayaasha oo ku adkaysanaya is-xakameynta hal-maskaxda leh ee khasaarta yaraynta kharashka kale ee tayada ee kale ayaa ku seegaya fursadaha xiisaha leh. Iyadoo la tixgelinayo asalka guud ee ku saabsan qaab-dhismeedka qaldan ee sahanka, waxaan hadda u jeedineynaa saddex qaybood oo muhiim ah oo ah baaritaanka sahanka saddexaad: hababka cusub ee matalaadda (qaybta 3.4), habab cusub oo lagu cabbirayo (qaybta 3.5), iyo istiraatiijiyado cusub oo lagu darayo sahammo oo leh ilaha xogta waaweyn (qaybta 3.6).